ब्रेन ट्युमर पीडित श्रीमतीका लागि उपचार खर्च खोज्न विवश बने प्रेम
काठमाडौं । गत फागुन २४ गतेदेखि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत ब्रेन ट्युमर पीडित रबिना राईको परिवारले आर्थिक सहयोगको याचना गरेका छन् । ३१ वर्षीया राईको श्रीमान प्रेमकुमार राईले आफ्नो आर्थिक
गण्डकी मेडिकल कलेजमा झडपः छात्राहरुमाथि प्रहरीले बुट बजारेको विद्यार्थीहरुको आरोप
उत्तम पौडेल, पोखरा , १३ माघ । पोखरामा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजमा सोमबार एकाएक झडप भएको छ । कलेजका बिद्यार्थीले हडताल गरेर अनशन बसेको लामो समय भइसक्दा पनि दुई पक्षबीच
यस्ता छन् स्तन क्यान्सरका लक्षणहरु !
एजेन्सी । पछिल्लो समय नेपालमा पनि धेरै महिलाहरु स्तन क्यान्सरको चपेटामा परिरहेका छन् । विशेषज्ञाहरुका अनुसार पछिल्लो समय क्यान्सर पीडित महिलाहरुको संख्या बढीरहेको छ । नेपालमा मात्रै नभएर हाम्रो छिमेकी
ट्रमा सेन्टरको उपकरण विग्रिएको ६ महिनामा पनि चासो दिइएन
रिया भण्डारी काठमाडौँ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको सीटी स्क्यान उपकरण विग्रिएको धेरै भएको छ । जसका कारण विरामी मर्कामा परेका छन् । तर, स्वास्थ्य उपचार मौलिक हक भएपनि सरकारी अस्पतालको
क्यान्सर रोकथामको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छः प्रा.डा.पौडेल
काठमाडौं, १२ फागुन । नेपालमा जनचेतनाको अभावले मानिसहरु क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगहरुबाट प्रभावित भएको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. विष्णुदत्त पौडेलले बताएका छन् । आइतबार राजधानीस्थित् बसुन्धाराको हेराल्ड कलेजमा क्यान्सर काउन्सिल
स्वीटजरल्याण्ठमा हरेक वर्ष नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ
काठमाडौं । हाम्रो देशमा हरेक पाँच वर्षमा नयाँ नेतृत्वको चयन हुन्छ भने कतिपय देशमा ६ त कतिपय देशमा ४ वर्षकपछि नयाँ नेतृत्व चुनन्छि । तर दुनियामा एउटा यस्तो देश छ
स्वास्थ्यकर्मीलाई सकारात्मक सोच र ओपीडि टिकट ब्यवस्थापन तालिम
सुरेश श्रेष्ठ दाङ,११ फागुन । राप्ती प्रादेशीक अस्पताल तुलसीपुरले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुका लागि ओपीडि टिकट ब्यवस्थाप,ब्यक्तित्व विकास र सकारात्मक सोच लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ । अस्पतालको आयोजनामा ७५ बढीलाई
सरकारी होमियोप्याथिक अस्पतालमा उपचारदेखि औषधिसम्म निशुल्क
काठमाडौं । झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर ललितपुरमा सञ्चालित एक अस्पतालले उपचार सेवादेखि औषधिसम्म निशुल्क दिइरहेको छ । ६५ वर्षदेखि सञ्चालित सरकारी स्वामित्वको एकमात्र होमियोप्याथिक अस्पतालमा वर्सेनि ८० हजार
काठमाडौं । काठमाडौं ‘ओम समाज शैक्षिक प्रष्ठिान’ले हेल्थ असिस्टेन्ट अध्ययन गरेका विराटनगरका अरुण कुमार मण्डलका शैक्षिक कागजपत्र नै गायब बनाइदिएको छ । ३ बर्ष एचए अध्ययन गरेका उनले अस्पतालमा प्राक्टिकल
एजेन्सी । खाना खानभन्दा ३० मिनेट पहिला पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । खाना खानुभन्दा ३० मिनेट पहिले पानी पिउँदा त्यसले बीचबीचमा पानी पिउने बानी हट्दै जान्छ। खाना पचाउने रसले त्यसपछि